VaJoe Biden Vanodoma Mudzimai Mutema, Seneta Kamala Harris, seMutevedzeri Wavo
VaJoe Biden and Senator Kamala Harris
Vari kumirira bato re Democratic Party musarudzo yemutungamiri we America ichaitwa musi wa 3 Mbudzi gore rino, VaJoe Biden, vadoma munhukadzi wechitema, Sineta Kamala Harris, veku California, kuti vave mutevedzeri wavo.
Vasati vasarudzwa kuve seneta, Amai Harris vakange vari gweta guru mudunhu reCalifornia kubva muna 2011 kusvika 2016 mushure mekunge vamboita gweta guru regita reSan Francisco.
Seneta Harris vakamboedzavo kukwikwidza kuti vapihwe mukana wekuva mumiriri webato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, vachikwikwidzana naVaBiden nevamwe vazhinji vebato iri asi havana kubudirira havo.
Seneta Harris vange vari mumwe wevanhukadzi vazhinji vakange vachiferefetwa kana vachikodzera kushanda semutevedzeri waVaBiden.
Pakambove nechimwe chikwata chakaedza kurwisa kuti Seneta Harris vasatorwa semutevedzeri waVaBiden vachiti vaiomesera zvakanyanya vasungwa pavakange vari gweta guru mudunhu reCalifornia.
Baba vaSeneta Harris vakazvarwa kuJamaica vakauya kuAmerica muna 1961 uko vakazove muzvinafundo mune zvehupfumi pachikoro chepamusoro, cheStanford University.
Amai vaSineta Harris, avo vakange vari muongorori wechirwere chegomarara uye vachirwirwa kodzero dzevanhu, vakauya kuAmerica vachibva kudunhu reTamil Nadu kuIndia muna 1960.
Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College, mudunhu reMassachusetts, Doctor Chipo Dendere, vanoti zvakange zviri pachena kuti vaviri vaidikanwa zvikuru pachigaro ichi, ndiAmai Kamala Harris naAmai Stacy Abrams, vedunhu reGeorgia.
Seneta Harris vari kutarisirwa kupinda muhurongwa hwekuedzana pfungwa nemutevedzeri waVaDonald Trump, VaMike Pence.